चक्रपथको ‘ग्रिन बेल्टमा’ पार्क गरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना!
उपत्यकाको चक्रपथमा सवारी साधान चलाउँदै गर्दा जथाभावी छेउछाउतिर पार्क गर्ने गर्नुभएको छ? यदि आजसम्म यस्तो गर्नुभएको छ भने सचेत हुनहोस। यसरी पार्किङ गर्दा तपाईलाई ट्राफिक प्रहरीले पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउन सक्छन्।
यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको सयुक्त संयन्त्रले चक्रपथको आसपासमा हुने जथाभावी पार्किङलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। जथाभावी पार्क गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाई आएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न
सचेतनादेखि जरिबानासम्मका उपाया अपनाउने निर्णय गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
यसका लागि पहिलो चरणमा चक्रपथको ग्रिन बेल्टमा सवारी साधन पार्किङ्ग निषेध गर्ने त्यसरी निषेध गरिएको ठाउँमा कसैले पार्क गरे पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउने पाण्डेले जानकारी दिए।
असार २५ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थामा हाल कायम त्यस्तो ग्रिन बेल्टका साथै सडक विस्तारले मेटाएको ठाउँमा पनि पार्किङ निषेध गरिने छ। असार २५ सम्म निषेधको सुचना टाँस गर्ने, जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्यक्रम गरिने र त्यसपछि पनि कसैले पार्किङ गरे जरिबाना तिराइने पाण्डेले बताए।
ग्रिन बेल्ट कहाँकहाँ पर्छ?
चक्रपथको छेउछाउँमा रुख रोपिएको क्षेत्र नै ग्रिन बेल्ट हो। मुख्य सडलाई छोडेरे रुख रोपेको क्षेत्र नै ग्रिन बेल्ट भएको पाण्डेले जानकारी दिए।
मुख्य सडक र रुखको बीचमा जसले पनि सवारी पार्क गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरोकारवालाहरुले सयुक्त टोलीले त्यसलाई निषेध गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए।
रुख रोपिएको क्षेत्र र सडक वा फुटपाथ र रुख रोपिएको क्षेत्र बीचको खाली ठाउँ पार्किङ निषेधको क्षेत्र कायम हुने र त्यस्तो ठाउँमा कसैले पनि पार्किङ गर्न नपाइने भएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २१, २०७४, ०७:३२:३५